Diiwaanka Uyghur - Xuquuqda Aadanaha & Farshaxanka Fudud ee ∴ PixelHELPER Foundation
Post Sticky By Oliver Bienkowski On 7. April 2016
PixelHELPER waxay taageertaa madaxbanaanida Uighurs, Hong Kong, Taiwan & Tibet
AOn July 29.07.2019th, 1 waxaan ku daabacnaa fiidiyowgii ugu horreeyay ee xuskeenna Uighur ee #Marrakech, waxaan u qornay dhammaan wargeysyada carabta wixii aan sameynay wax jawaab ahna kama helin ka dib markii aan u sheegnay wargeysyada in safka ugu horreeya ee xuska uu yahay Yuhuudda qaniisiinta ah ee ka hartay xusuusta oo ah "Xusuus-tirkii Holocaust ee Marrakech" taariikhda Morocco. Nacayb ka dhan ah midnimada muslimiinta Uighurs ayaa guulaystay. Ilaa maanta, ma jiro waddan Muslim ah oo adduunka ka mid ah oo taageera Uighurs inta ay u baahan yihiin. Waxaan rajeyneynaa in 100 sano lagu xasuusto xuska u horeeya ee dadka muslimiinta ah ee reer turki ee Uighurs waxay noqon doontaa meel badal u noqota midowga wadamada muslimiinta iyo Uighurs.
Haddii Shiinuhu ay dumiyaan 1000 kaniisadood, ciil weyn ayaa ka jiri lahaa Yurub. Dab ku jira shucaaca cathode-ka ayaa halkaan ku shidi kara wadajirka adduunka. 1000 masaajid & Kaniisado Masiixiyiin ah ayaa horey loogu burburiyey Shiinaha. Waxaan u soo bandhignay dhammaan Uyghurs in dib loogu dhiso iyaga oo ah nuqul dhab ah oo dibedda ah si loo abuuro midnimo dadka Muslimiinta ah ee dulman ee adduunka. Nasiib darrose, inta badan Uyghurs waxay ku jiraan dhuumaaleysi ama xeryo dib-u-waxbarasho oo Shiine ah waana faqiir. Taasi waa sababta aan u sameynay aruurinta GoFundme. Waxay kuxirantahay inta aan aruurino, ama waxaan dhiseynaa maktabad, masaajid ama qabri.
Shiinaha wuxuu burburiyey in kabadan 3 masaajid, qabuuro & cibaado 1000 sano gudahood. Beijing waxay si nidaamsan u burburisaa dhaqanka & diinta Uyghurs-ka Muslimiinta. Sawirada dayax gacmeedku waxay muujinayaan sawir cabsi leh. PixelHELPER wuxuu tusaale u noqon doonaa oo dib u dhisi doonaa qabrigii Iman Asim ee la burburiyey ee buuraha Marooko iyadoo leh taallo xusuus u leh burburka Shiinaha. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mashruuca
Waxaan dalbaneynaa dimoqraadiyada Shiinaha. Waxayna leeyihiin dalal Uyghurs, Hong Kong, Taiwan & Tibet. Xisbiga Shuuciga waa in si deg deg ah loo kala diraa. Qoolleyda saadaasha khafiifka ah
Waxaan dalbaneynaa xorriyadda diinta ee Shiinaha, ixtiraamka xuquuqda aadanaha & doorashooyinka dimoqraadiga ee mustaqbal wanaagsan. Masaajidyada oo dhan waa in dib loo dhisaa iyadoo kharashka laga bixinayo Shiinaha, dhammaantood #Uiguren Waa inaad xor u noqotaa inaad ku dhaqanto rumaysadkiinna.
Waxaan codsaneynaa in si deg deg ah loo sii daayo dhamaan Uyghurs & hordhaca
xorriyadda diinta ee Shiinaha. Qof kastaa wuu ku rumaysan karaa waxa uu rabo, bahalka bahalka duulaya ama mid ka mid ah diimaha adduunka. Shiinaha waa inuu joojiyaa inuu dadkiisa ka hor istaago inay ku dhaqmaan xorriyadda diinta. Xorriyadda diintu waxay ka mid tahay dastuurka Jarmalka - dastuurka Shiinaha waa inuu tan tusaale u soo qaataa.
Ololaha loogu talagalay Muslimiinta Uighurs ee Shiinaha / Xuquuqda Aadanaha Febraayo 24th, 2021Oliver Bienkowski